Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ọbịa ọbịa » Kedu ka ị ga -esi kwụsị nsogbu ịchekwa vidiyo?
Nchịkọta: Ọtụtụ n'ime anyị na -eji smartphones na ihe nchọgharị laptọọpụ anyị maka ọrụ yana ebumnuche ntụrụndụ. A bịa n'ihe ntụrụndụ, ikiri ihe nkiri, vidiyo YouTube, na akụkọ vidiyo ebugharị na reel na nyiwe mmekọrịta ọha a ma ama, bụ nhọrọ anyị. Mana ị nwetụla nsogbu na -egbochi vidiyo mgbe ị na -enuba ọdịnaya n'ịntanetị? Ọ́ bụghị ihe kacha akpasu iwe? Ọfọn, ọ bụghị ọzọ! Edemede a ga -enye gị ohere ịbanye na mwepụ ole na ole ị nwere ike iji dozie nsogbu ịchekwa vidiyo na ikpo okwu ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị na -ekiri ọdịnaya n'ịntanetị oge niile, ọ ga -abụrịrị na ị zutere akara ngosi vidiyo na -atụ egwu n'oge ụfọdụ.
Gburugburu okirikiri a na -agbagharị agbagharị nwere ike bụrụ ihe ikpeazụ ịchọrọ ịhụ mgbe ị na -agbalị n'udo ịse ihe nkiri nwere nnukwu popcorn na ngwụsị izu.
Ọ nwere ike mebie ahụmịhe niile maka gị.
Mana ị chetụla ihe kpatara nke a? Ọ dị mma, ọsọ ịntanetị ngwa ngwa bụ otu ihe kpatara vidiyo na -eji egwu na -egwu, mana enwere ike inwe ọtụtụ ihe kpatara okwu a? Ọzọkwa, ọ nwere ihe ọ bụla ị nwere ike ime iji kpochapụ ya? Sonyere anyị ka anyị na -egosi gị otu esi akwụsị nsogbu ịchekwa vidiyo otu ugboro.
Ihe mbu bu ụzọ - Gini mere vidiyo ji echekwa?
Mgbe ị na -ekiri vidiyo ozugbo na ịntanetị, echekwara vidiyo na nchekwa mpaghara gị kama na sava igwe ojii. A na-ebudata ya dị ka data ozugbo wee kpọọ ya na ngwaọrụ gị. Oge ọ bụla ma ọ bụ nkwụsị ọ bụla na nbudata nwere ike ime ka vidiyo ahụ daa ma ọ bụ rapara n'oge a na -egwu egwu, na -amanye gị ịhụ akara nbudata na enyo. A na -akpọ usoro a '' buffering, '' usoro ibubata vidiyo n'ime ihe nchekwa ebe nchekwa ngwaọrụ.
Dị ka o kwesịrị, ibugo vidiyo ahụ kwesịrị ime nke ọma nke na onye ọrụ ikpeazụ ahụghị ihe ọ bụla na-enwu n'oge ịkpọgharị. Mana nke a anaghị eme oge ọ bụla n'ihi ihe ndị a:
Ọsọ ịntanetị ezughi oke
Ee, ọsọ dị mkpa. Ndị na-enye ọrụ ịntanetị na-alụkarị ọgụ siri ike, na-ekwe ndị ọrụ nkwa nbudata data kachasị ọsọ maka nke a. Ọ bụrụ na bandwidị njikọ ịntanetị gị ezughi oke, ị ga -enwekarị nsogbu na -echekwa vidiyo. Ị nwekwara ike na -eche nsogbu a ihu ma ọ bụrụ na modem ma ọ bụ router gị bụ ihe mgbe ochie ma ọ bụ na ọ naghị arụ ọrụ nke ọma. Ọtụtụ ngwaọrụ ejikọrọ n'otu netwọk n'otu oge nwekwara ike tufuo njehie a.
Kedu mgbe ikpeazụ ị kwalite router gị? Mgbe ị na -emelite router gị na ụdị nke ọhụrụ dị mma, iji routers ndị na -eme njem ochie na -akpata nsogbu mgbe ụfọdụ. Lelee ma nkọwa nke rawụta gị dabara ihe ISP gị na -enye. Tinyere nke a, gbaa mbọ hụ na kọmputa gị anaghị eche nsogbu ọ bụla ihu dịka ndị ọkwọ ụgbọ ala netwọkụ oge ochie, draịva kaadị eserese mebiri emebi, ihe nchọgharị weebụ na -adịghị mma, wdg.
N'ịga n'ihu, ka anyị nwaa ugbu a ịhụ ka esi edozie ntughari vidiyo site na iji usoro dị mfe.
Otu esi akwụsị ịchekwa vidiyo
Enwere ọtụtụ azịza maka nsogbu ịchekwa vidiyo, yabụ na ọ bụ ihe amamihe ịmalite site na ndozi ntuziaka kachasị mfe (edepụtara na mbụ) wee gaa na nke ọzọ ma ọ bụrụ na nke gara aga anaghị arụ ọrụ.
1. Lelee ọsọ ịntanetị gị
Ọ bụrụ na ọtụtụ ndị otu na-eji ịntanetị n'ime ezinụlọ gị, ị ga-achọkarị njikọ ọsọ ọsọ, nke nwere ike ịkwado sọfụ dị mma n'ọtụtụ ngwaọrụ n'otu oge. Iji lelee oke ngwa ngwaọrụ gị (nke vidiyo na -echekwa) na -anata, jiri ihe nchọgharị weebụ gị mee nnwale ọsọ ịntanetị dị mfe. Ọ bụrụ na ọsọ dị ala karịa ihe ịchọrọ, kpọtụrụ ISP gị maka atụmatụ bandwidth ka mma.
Nwalee ọsọ ịntanetị
2. Wepụ mmemme na -agba n'okirikiri
Ọ bụrụ na ị na -eche nsogbu nrụpụta na kọmputa gị, lelee ibu nke sistemụ gị ugbu a site na Task Manager. Ọ bụrụ na ọrụ karịrị akarị juputara na kọmputa gị yana igosi ebe nchekwa dị elu, ị gaghị enweta nzaghachi dị mma na vidiyo gụgharia. Ebe ọ bụ na akụrụngwa kọmputa na -arụ ebe ọzọ, ọ gaghị agbasa vidiyo ka ọ kwesịrị. Iji merie okwu a, pịgharịa na ndepụta usoro wee hụ ndị na -eri ọtụtụ akụrụngwa. Ọ bụrụ na ị naghị eji ha, họrọ ha site na ịpị ha otu ugboro, wee pịa "Ọrụ njedebe" bọtịnụ iji kwụsị usoro ndị a.
Mechie usoro kpụ ọkụ n'ọnụ akụ na-agba n'okirikiri
3. Belata ogo vidiyo ị na -ele
Ọ bụghị ihe nzuzo na vidiyo dị elu buru ibu na nha faịlụ. Ugbu a oke vidiyo a ka ukwuu, oge na ike ka ọ ga -ewe iji gbasaa ya n'ofe ịntanetị. Yabụ iji meziwanye ahụmịhe nlele, nwaa ilele ụdị vidiyo vidiyo dị ala. Ị nwere ike ịchọta nhọrọ ịhọrọ n'etiti mkpebi vidiyo ịchọrọ ikiri na Netflix, YouTube, na nyiwe ndị ọzọ.
Belata ogo vidiyo ị na -ekiri
4. Budata vidiyo na ngwaọrụ gị
Ọ bụrụ na ọ nweghị ihe ọzọ na -arụ ọrụ, ihe kacha mma ga -abụ ibudata vidiyo ahụ na nchekwa mpaghara gị. N'ụzọ dị otu a, opekata mpe mgbe nbudata ahụ mechara, ị ga -enwe ike ilele ya na -enweghị nkwụsị. Ị nwekwara ike ịnwale mbanye anataghị ikike kachasị mfe na ngwa ngwa nke ịmepụta nnukwu nchekwa site na ịkwụsịtụ iyi ahụ ruo nkeji ole na ole wee malite ọzọ.
Budata vidiyo na ngwaọrụ gị ma ọ bụ kwụsịtụ ka ịmepụta nnukwu nchekwa
Ebudatara vidiyo mana ọ ka na -arụ ọrụ? Gbalịa nke a!
Ọ bụrụ na ịnwalela ma nwalee aghụghọ nbudata vidiyo ahụ mana ọ ka na -egwu nke ọma, faịlụ mbụ ebugoro nwere ike mebie ma ọ bụ mebie ya. N'ọnọdụ dị otú a, iji ntụkwasị obi na ịrụzi ya rụzie ya ngwa mmezi vidiyo akwadoro.
N'echiche anyị, Stellar Repair for Video bụ nhọrọ kachasị mma na ọnọdụ a. Na -ebuso vidiyo mebiri emebi n'ụdị ọ bụla, sọftụwia a bụ azịza kacha mma maka okwu "otu esi akwụsị nkwụsị vidiyo". Ngwaọrụ na-eso usoro 3 dị mfe. Ọ na -abịa na interface kensinammuo nke na -eme ka ya na ya rụọ ọrụ dị mfe.
Nke a bụ otu ị ga -esi jiri ngwa a dozie ndozi vidiyo:
Gaa na ibe ngwaahịa ngwaahịa maka Ndozi Stellar maka vidiyo wee pịa "Free Download" njikọ.
Mgbe ebudatara faịlụ a, pịa ugboro abụọ iji wụnye ngwa ahụ.
Ozugbo nrụnye ahụ mechara, malite nrụzi Stellar maka vidiyo.
Na ngwanrọ a, pịa igbe nke kwuru "Tinye faịlụ" ka ịgbakwunye faịlụ vidiyo a chọrọ ịrụzi. Ịnwere ike ịgbakwunye ọtụtụ faịlụ ebe a.
Ndozi Stellar maka ihuenyo ụlọ vidiyo (https://www.stellarinfo.com/onlinehelp/en/stellar-repair-for-video-win-4/)
Mgbe ịtinye faịlụ na ngwaọrụ, pịa na "Mmezi" bọtịnụ ka ịmalite usoro nrụzi.
Ndozi Stellar maka mmezi faịlụ vidiyo agbakwunyere (https://www.stellarinfo.com/onlinehelp/en/stellar-repair-for-video-win-4/)
A ga -egosipụta ogwe ihe ịga n'ihu iji gosi ole usoro a mechara.
Ndozi Stellar maka ọganihu ndozi vidiyo
Mgbe emeziri faịlụ vidiyo, ị nwere ike ịhụchalụ ha tupu ịchekwa ha na kọmputa gị.
Ndozi Stellar maka vidiyo nlele vidiyo tupu ịchekwa (https://www.stellarinfo.com/onlinehelp/en/stellar-repair-for-video-win-4/)
Mgbe faịlụ vidiyo ebudatara rụziri, nwaa ịkpọ ya. Dị ka o kwesịrị, ị gaghị eche nsogbu okwu vidiyo ọ bụla ihu ugbu a.
Iji kechie ya
Ichekwa vidiyo bụ okwu na -adakwasị onye ọ bụla na -enyocha ọdịnaya ịntanetị. Ma, obi dị m ụtọ, ugbu a, enwere ụzọ edozi nsogbu a! Na mgbakwunye na ịlele ọsọ ịntanetị gị na imechi ngwa ọdịnala, enwere ike ịnwale nbudata vidiyo na sistemụ mpaghara gị. Ọ bụrụ na vidiyo ebudatara na -egwukwa egwu, egbula oge iji ngwaọrụ dị ka Ndozi Stellar maka vidiyo mezie ndozi vidiyo.